အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်း Card ကို PC ကွန်ပျူတာပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် RFID Card ကို, PC Material ID Card, Polycarbonate ပစ္စည်း Card ကို, Polycarbonate Material High Temperature Resistant Identification Card, Polycarbonate Material Smart Card, RFID Polycarbonate Card
chip အမျိုးအစား: ISO ကို 11785/11784, ISO ကို 14443, ISO ကို 15693, ISO ကို 18000-6B / 6C
chip အကြိမ်ရေ: LF 125KHz / HF 13.56MHz / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 860 ~ 960MHz
chip အမျိုးအစား: M1 S50 / S70, M1 ULT10, M1 ULT C, ICODE2 SLI ကို / SLI ကို-S က / L-SLI ကို / SLIX, SLIX-L ကို, MF DesFi 2K / 4k / 8K, Ti2048, EM4102, EM4200, EM4305, EM4450, TK4100, T5557, CET5500, Hitagl, Hitag2, Hitags, FMl208 (စီပီယူ),စသည်တို့ကို.
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 1-10m(စာဖတ်သူကိုအင်တင်နာနဲ့လျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်မှာအရ)
တည်မြဲခြင်း: >100,000 times
ဒေတာကို retention ကို: >10 years
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ: PC ကို(Polycarbonate), 0.13မီလီမီတာကြေးနီဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်စွဲလူမီနီယမ်
PC ကို (polycarbonate) isanew thermoplastic engineering plastic, polycarbonate having excellent performance of electrical insulation and mechanical properties, especially the impact resistance performance of the most prominent, hard, high toughness, allowing the use ofawide range of temperature (-100℃ ~ + 130 ℃), the transparency of up to 90%, known as the transparent metal, flame retardant good performance, green non-toxic, easy processing molding.
The use of PC material for manufacturing RFID chip card, မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်,in the environment of high temperature will not bend, non-toxic environmental protection, လှပတာရှည်ခံ. You can create all kinds of size, thickness and shape, surface can be silk screen pattern, လိုဂို, QR ကုဒ်ကို, အမှတ်စဉ်နံပါတ်.
Credit card, bank card, prepaid card, passport, တဦးတည်းကတ် Solutions, identification card, enterprise/campus card, ဘတ်စ်ကားကဒ်, highway fees, ကားရပ်ခြံ, အသိုင်းအဝိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, Gas stations, low temperature and high temperature operating environments,စသည်တို့ကို.
I am interested in your product Polycarbonate Material Card, PC ကွန်ပျူတာပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် RFID Card ကို
prev: PP ပစ္စည်း RFID Chip ကဒ်, polypropylene ပစ္စည်းစမတ်ကဒ်
နောက်တစ်ခု: PETG ပစ္စည်း RFID Card ကို, PETG ပစ္စည်း ID ကိုကတ်